सगरमाथा आरोहणमा अमेरिका र हङकङका नागरिकले तोडे नेपालीको एस्तो रेकर्ड ! – UPDATE LINK
सगरमाथा आरोहणमा अमेरिका र हङकङका नागरिकले तोडे नेपालीको एस्तो रेकर्ड !
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका र हङकङका आरोहीहरूले छुट्टा–छुट्टै कीर्तिमान बनाएका छन् ।उनीहरुले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका हुन् ।
७५ वर्षीय अमेरिकी नागरिक आर्थर मुइरले गत आइतबार ८८४८.८६ मीटर अग्लो संसारको सैब भन्दा अग्लो शिखर चढ्ने सबैभन्दा वृद्ध अमेरिकीको कीर्तिमान बनाएका छन् ।
यो अभियानको आयोजना गर्ने कम्पनीका एक अधिकारीले यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।अर्कोतिर हङकङकी ४५ वर्षीया तासाङ् इन हुङ्ले २६ घण्टा भन्दा कम समयमा शिखर चढेर नयाँ रेर्कड बनाइन् ।कुनै महिलाले आधार शिविरबाट यात्रा सुरु गरे पछि यति कम समयमा सगरमाथा आरोहण गरेको यो पहिलो पटक हो ।
तासाङ्ले आधार शिविरबाट शुक्रबार दिउँसो १ः२० बजे यात्रा सुरु गरिन् । उनी शनिबार दिउँसो ३ः१० जे चुचुरोमा पुगेकी थिइन् ।तासाङ्ले नेपाली महिला फुन्जो जाङ्गु लामाको रेकर्डलाई तोडेकी छिन् । यसअघि लामाले ३९ घण्टा ६ मिनेटमा सगरमाथा आरोहण गरेर कीर्तिमान बनाएकी थिइन् ।
सामान्यतया आरोहीहरूले शिखरमा पुग्नु भन्दा पहिले धेरै दिन बिभिन्न शिविरहरूमा बिताउँछन् । म्याडिसन पर्वतारोहण कम्पनीका अभियानकर्ता गैरेट मैडिसनले आधार शिविरबाट रोयटर्सलाई भने, ‘सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने ७५ वर्षीय आर्थर मुइर सबैभन्दा वृद्ध अमेरिकी हुन् ।’ यसअघि यो उपाधि सन् २००९ मा ६७ वर्षीय अमेरिकी बिल बुर्कको नाममा थियो ।उनको उक्त कीर्तिमान १२ वर्षपछि मुइरले तोड्दिएका छन् । भोलिपल्ट, आधार शिविरबाट फर्केका सरकारी अधिकारी ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले यसबारेमा जानकारी दिनुभयो ।